Mharidzo Inoburitsa Mhedzisiro
Muvhuro, June 20, 2011 Chitatu, October 16, 2013 Jenn Lisak Golding
Kana isu tiri kushambadzira, yakawanda nguva, isu tinofunga chete nezve mhedzisiro. Ini ndoda kushandura iyi yakawanda tarisiro, isu tinoda kuti vanhu vazive nezve Chigadzirwa X, ini ndoda iyi yakawanda retweets / masheya, nezvimwe. Usandibate zvisirizvo, zviri pachena kukosha kuteedzera izvi zvinhu kuitira kuti uzive kana kushambadzira kwedu meseji iri kushanda. Nekudaro, ini ndaona kuti kana ini ndisina kana chinangwa chaicho mumamessage angu ekutengesa, ndanga ndiine chekuita kana mhedzisiro.
Funga nezvazvo: wakanyora chinyorwa chaive chakaita senge rant kana blog-inofunga-maonero zvichipesana ne "10 Matanho ekuti Ungagadzirise Sei Blog Rako"? Ndeipi yaive mhinduro / yekubatanidzwa chikamu pane iyo posvo? Ini ndakagadzirira kubheja kuti yaive yakati rebei kupfuura yakajairwa "kukosha-wedzera" posvo nezve kuisa meta tag.
Inotevera nguva iwe paine chinhu chekutaura icho chingave chakanyanya kufunga-kwakavakirwa pane kukosha-wedzera, nyora. Ipa zvaunofunga. Kunyangwe vanhu vakasabvumirana, iwe unogona achiri kutanga nhaurwa inonzwisisika iyo vanhu vachanakidzwa nekugovana.
Tags: AnalyticsKukurudzira 2008WordPress
Jenn Lisak Golding ndiye Mutungamiri uye CEO weSapphire Strategy, dhijitari inosanganisa data rakapfuma neruzivo-kumashure intuition kubatsira B2B zvigadzirwa kuhwina vatengi vakawanda uye kuwedzera kwavo kushambadzira ROI. Anopa mubairo-anokunda, Jenn akagadzira iyo Sapphire Lifecycle Model: humbowo-hwakavakirwa odhita yekushandisa uye gwaro rekushambadzira kwepamusoro-soro.
Pindura pa Twitter uye Vachatenga
Nhoroondo yeWebhu neSocial Analytics